Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo BUKA: I-trailer ye-Netflix 'ye-Fear Street Trilogy' ibeka iTerror Front nesikhungo
by Waylon Jordan June 9, 2021 2,012 ukubukwa
Sinezinyanga ezingaphansi kwenyanga kuze kube I-Netflix's Isabha Street I-Trilogy ama-debuts, futhi ipulatifomu yokusakaza ilahle i-trailer entsha sha namuhla ukusinikeza umbono ojulile wokuthi kunjani ukwesabeka okusha abakugcinile!
I-trilogy yamafilimu izokhipha eyodwa ngesonto eqala ngoJulayi 2, 2021 futhi izokwenzeka ngo 1994, 1978, nango-1666. Amazwibela amafilimu athi:
Ngo-1994, iqembu lentsha lathola ukuthi izehlakalo ezethusayo ezihlasele idolobha labo ezizukulwaneni ngezizukulwane zingase zixhunywe zonke - nokuthi bangaba izisulu ezilandelayo. Ngokusekelwe ochungechungeni lwama-horror athengisa kakhulu e-RL Stine, i-Fear Street ilandela amaphupho amabi ngomlando omubi kaShadyside.
The Isabha Street izincwadi zaqala ukushicilelwa ngonyaka we-1989. Kwakuyisenzo esincomekayo kuRL Stine, bekulindelwe ukuthi izilaleli zakhe ziyakhula nokuthi bazofuna izincwadi ezikhula nazo. Izigxobo zaziphakeme kulezi zincwadi, futhi yize kwakukhona ukufa okumbalwa ku- goosebumps izincwadi, lokho akwethule Isabha Street kwakunzima kakhulu.
Lolu chungechunge seluthengise amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-80 emhlabeni wonke kuze kube manje futhi lisale, kwabanye abalandeli abesabekayo, isango labo lokungena kulo hlobo.
I-trailer entsha impela ishubile, yethula indaba eyeqa ngesikhathi enemiphumela esabekayo. Bheka ngezansi, futhi usazise uma uzobuka Isabha Street lapho iqala ukusebenza kuNetflix ngoJulayi 9, 2021!